समाधानहरू - gomymobi.com
प्रस्तावहरू शक्तिशाली समाधानहरू
तपाईंको व्यवसाय बनाउनुहोस् सफलता & माथि उडान !!!
gomymobi.com तपाइँलाई तपाइँको व्यवसाय साइटहरू छिटो, सजिलो र प्रभावकारी रूपमा निर्माण गर्न मद्दत गर्न डिजाइन गरिएको हो। सबै आवश्यक उपकरणहरू तपाईंको व्यवसाय र रचनात्मक उत्पादनहरू विश्वमा प्रस्तुत गर्न।
तलका शक्तिशाली सुविधाहरू पत्ता लगाउनुहोस् जुन तपाईं आफ्नो अनलाइन उपस्थिति डिजाइन र प्रबन्ध गर्न प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
वा अब सुरू गर्नुहोस्
gomymobi.com एक वेब प्लेटफर्म हो तपाइँलाई समर्पित वेब सेवाहरूको महँगो विकास समय वा महँगो शुल्कको घण्टामा लगानीको आवश्यकता बिना पूर्ण रूपमा उत्तरदायी व्यापार वेबसाइटहरू सिर्जना गर्न मद्दत गर्न। बाहेक, तपाईं असीमित स्टोरहरू सिर्जना गर्न सक्षम हुनुहुनेछ तपाईंको रचनात्मक उत्पादनहरू सिधै विश्वभरिका खरीददारहरूलाई बिक्री गर्न।
हामी तपाईंको ब्रान्ड नाम र सबै भन्दा राम्रो रचनात्मक उत्पादनहरू तपाईंको ईकामर्स स्टोर बिल्डरको साथ विश्वका सबैलाई प्रस्तुत गर्दछौं। हामी असीमित स्टोर बेच्न असीमित उत्पादनहरू बेच्न मद्दत गर्दछौं; कुनै लेनदेन शुल्क को लागी, भाँडा शुल्क छैन; तपाईंले बेच्नुहुनेको लागि तपाईं 100% भुक्तानी कमाउनुहुनेछ।
हाम्रो मिशन यहाँ तपाईं समर्थन गर्न सबै भन्दा राम्रो सरल समाधान मा केन्द्रित छ।
स्टोर खोल्नुहोस् र बेच्नुहोस्
हाम्रो अद्भुत ग्राहकहरू आश्चर्यजनक समाधान मन पराउछन्
हाम्रो पहिलो लक्ष्य हाम्रा ग्राहकहरुलाई खुशी पार्न केन्द्रित छ। हो, यो तपाईंको मार्गको लागि काम गर्ने तरीका हो।
अग्रिम व्यापार समाधान
कस्टम कोड सम्पादक
सदस्यता र भर्चुअल सामानहरू
स्क्र्याचबाट तपाईंको व्यवसाय वेबसाइटहरू निर्माण गर्न सुरू गर्नुहोस् वा धेरै डिजाइनर-टेम्प्लेटहरू छनौट गर्नुहोस्। विश्वको सबैभन्दा नवीन ड्र्याग र ड्रप वेबसाइट बिल्डरको साथ, तपाईं आफूलाई चाहिएको वा चाहानु भएको कुनै पनि वेबसाइट डिजाइन र विकास गर्न सक्नुहुन्छ।
नि: शुल्कको लागि एलिमेन्ट बिल्डर प्रयास गर्नुहोस्
कुनै पनि साइटमा धनी व्यापार पूर्वाधार संलग्न गर्नुहोस्। सबै ईकामर्स, स्ट्रिमि,, र सदस्यता समाधानहरू पूर्ण रूपमा कायम छन् र निर्मित उत्तरदायी व्यवहारको साथ आउँदछ।
कार्यमा अन्वेषण गर्नुहोस्
तपाईंको इच्छाले केहि थप्न वा सम्पादन गर्न अनुकूलन कोड सम्पादकको प्रयोग गरेर उन्नत वेब अनुप्रयोगहरू निर्माण गर्नुहोस्। पर्दा पछाडि सबै भारी सामग्री प्रबन्ध गर्नुहोस् र यसलाई उत्तरदायी दोहोर्याउने सजावटहरूमा सुन्दरताले प्रदर्शन गर्नुहोस्।
कुनै सर्त, सदस्यता र सेवाहरू, भर्चुअल सामानहरू, सामग्री, समुदायहरू र सफ्टवेयरको लागि प्याकेजहरू बिक्री गर्नुहोस्। विभिन्न प्रकारका परीक्षण अवधिहरूको साथ सुरक्षित भुक्तान प्रदायकहरूको विभिन्न प्रकारको साथ आवर्ती वा एक पटक भुक्तान प्रस्ताव।
स्वागत छ gomymobi.com
उत्तम सहि ठाउँ तपाईंको भयानक व्यापार वेब साइटहरू होस्ट गर्न
उत्तम नि: शुल्क ईकॉमर्स समाधान तपाइँको अनलाइन स्टोरहरूको लागि
तपाईंको व्यापार वेबसाइट को लागी नि: शुल्क
gomymobi.com तपाइँलाई तपाइँको पहिलो व्यवसाय साइट सिर्जना गर्न मद्दत गर्न खुशी छ, र यसलाई जीवनभर मा नि: शुल्क होस्ट गर्नुहोस्।
दर्ता धेरै सरल र छिटो हो, कुनै क्रेडिट कार्ड आवश्यक पर्दैन; र तपाईंको नि: शुल्क खाता र व्यापार वेबसाइट सँधै हामीसँग रहनुहोस्।
UNLIMITED स्टोरहरू खोल्नुहोस्
यदि तपाईं बिभिन्न उत्पादनहरू बेच्न असीमित अनलाइन स्टोरहरू खोल्न आवश्यक छ भने, तपाईं सबै सजीलै गर्न सक्नुहुन्छ।
विभिन्न उत्पादनहरू बेच्नुहोस्
हाम्रो eCommerce प्लेटफर्मको साथ, तपाईं दुबै डिजिटल र भौतिक उत्पादनहरू बेच्न सक्षम हुनुहुन्छ, र सजिलैसँग समान स्टोरमा सदस्यता।
यदि तपाईंसँग पहिले नै डोमेन छ र यसलाई सिर्जना गरिएको वेबसाइटको लागि प्रयोग गर्न चाहानुहुन्छ भने, केवल यस डोमेनलाई माना assign्कन गर्नु पर्छ त्यसपछि तपाईंको व्यवसाय वेबसाइट यो कस्टम डोमेनको साथ चलाउनुहोस्। तपाईंको व्यवसाय साइट अनुकूलन डोमेनको साथ अधिक व्यावसायिक देखिन्छ।
FTP मार्फत अपलोड गर्नुहोस्
यदि तपाईंसँग निजी होस्ट छ र तपाईंको सिर्जना गरिएको वेबसाइट होस्ट गर्न चाहानुहुन्छ भने, हामीसँग एक क्लिकमा तपाइँको होस्टमा सबै वेबसाइट फाइलहरू अपलोड गर्न मद्दत गर्न एक सजिलो उपकरण छ। वा तपाईं स्थानीय रूपमा पूरा साइट डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ।
प्रत्येक साइटको लागि अद्वितीय सबडोमेन
केवल १ क्लिकको साथ तपाईंको व्यवसाय साइट प्रकाशित र संग्रह गर्न सक्षम हुनुहोस्।
किफायती र लचिलो सदस्यताहरू
एकचोटि तपाईंले हाम्रा समाधानहरू पूरा गर्नुभयो भने, हामी तपाईंको खाता अपग्रेड गर्न धेरै शक्तिशाली सुविधाहरू प्राप्त गर्न धेरै व्यावहारिक सदस्यता प्रदान गर्दछौं।
थिम इजाजतपत्र बेचेर कमाउनुहोस्
तपाइँ हामीसँग पैसा कमाउनको लागि सक्षम हुनुहुन्छ, अन्य प्रयोगकर्ताहरूमा तपाइँको विषयवस्तु इजाजतपत्रहरू बेचेर। तपाईं सबै आय प्राप्त गर्नुहुनेछ, हामी कुनै शुल्क लिदैनौं।
वेबसाइट थिम मार्केटप्लेस
gomymobi.com सबै प्रयोगकर्ताहरूको लागि आफ्नो मनपर्ने थिमहरू बेच्नको लागि पनि एक ठाउँ हो, सिर्जनाकर्ताहरू नि: शुल्कको लागि विषयवस्तु प्रदान गर्न सक्दछ वा २ लाइसेन्सको लागि बेच्न: प्रति निर्माण वा आजीवन।
स्पष्ट छ, सृष्टिकर्ताले उनीहरूको विज्ञापन कोड (वा प्लेटफर्म) सम्मिलित गर्न सक्नेछन् एक पटक तिनीहरू नि: शुल्क दिन चाहन्छन्।
असीमित वेबसाइटहरू र पृष्ठहरू
तपाईं असीमित वेबसाइटहरू सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ र प्रत्येक वेबसाइटको लागि असीमित वेब पृष्ठहरू सिर्जना गर्नुहोस्।
निर्मित ट्राफिक ट्रैकर
हामीसँग अंतर्निहित ट्राफिक ट्र्याकर छ जसले तपाईंलाई भ्रमणहरू र पृष्ठ दृश्यहरू गणना गर्न मद्दत गर्दछ, यी तथ्या .्कहरू दिनदिनै ट्र्याक गर्न सकिन्छ।
निश्चित रूपमा, तपाईं आफ्नो अन्य ट्र्याकर प्लेटफर्म घुसाउन सक्नुहुन्छ, जस्तै गुगल एनालिटिक्स सजिलो र चाँडो।
पूर्ण उत्तरदायी साइटहरू र थिमहरू
सबै विषयवस्तुहरू र साइटहरू पूर्ण रूपमा उत्तरदायी र मोबाइल मैत्री छन्, कुनै पनि आधुनिक ब्राउजरहरूको कुनै पनि स्क्रीन रिजोलुसनमा काम गर्नको लागि डिजाइन गरिएको।
र अधिक महत्त्वपूर्ण, नियन्त्रण प्यानल र प्रयोगकर्ता ईन्टरफेस पनि पूर्ण उत्तरदायी छन्, प्रयोगकर्ताहरू प्रबन्धन गर्न सक्दछन् र साइटहरू जहिले पनि जहाँसुकै सिर्जना गर्न सक्दछन्।
शक्तिशाली प्रदर्शन र गति
हाम्रो प्रणाली तपाइँको वेबसाइट र स्टोरहरुलाई उत्तम गति र प्रदर्शन दिन डिजाइन गरिएको हो।
तपाईंले स्थापना गर्न चाहानुभएको प्रत्येक व्यवसायको लागि over over भन्दा बढी डिजाइनर-निर्मित साइट थिमहरू मध्ये छनौट गर्नुहोस्।
कुल डिजाइन स्वतन्त्रता
तपाइँको साइटलाई हाम्रो नवीन ड्र्याग र ड्रपको साथ तपाइँले चाहानु भएको अनुसार डिजाइन र विकास गर्नुहोस्।
मिडिया ब्राउजर बढाउनुहोस्
हाम्रो शक्तिशाली मीडिया ब्राउजरको साथ एक सुन्दर ग्यालरी लेआउटमा तपाईंको छवि, भिडियो वा कुनै पनि मल्टिमेडिया सामग्री प्रदर्शन गर्नुहोस्।
तपाईंको डिजिटल वा भौतिक वस्तुहरू र सेवाहरू वा व्यापारलाई सुन्दर अनलाइन स्टोरमा प्रस्तुत र बेच्नुहोस्।
स्टोर र उत्पाद प्रबन्धक
सबै अर्डरहरू ट्र्याक गर्नुहोस् र कुनै डेसिभबाट तपाईंको सूची प्रबन्ध गर्नुहोस्: डेस्कटप, ल्यापटप, ट्याबलेट वा मोबाइल।
बहु भुक्तानी विधि
एक विश्वसनीय भुक्तानी समाधान प्रस्ताव गर्नुहोस् जसले तपाईं र तपाईंको ग्राहकहरूको लागि अनलाइन लेनदेनहरू सरल र सुरक्षित बनाउँदछ। क्रेडिट कार्डहरू स्वीकार गर्नुहोस्, PayPal, Stripe, Authorize.net, अफलाईन भुक्तानी र अधिक - कमीशन निशुल्क।
मौसमी छुटहरू र विशेष घटनाहरूको लागि आदेशहरूमा निःशुल्क शिपिंग प्रस्ताव गरेर स्टोरफ्रन्ट बिक्री बढावा।
हामीलाई तपाईंको व्यवसाय बढाउन र यसलाई उडानमा उचाल्न अनुमति दिनुहोस् !!!
अब तपाइँको वेबसाइट र स्टोरहरू निर्माण गर्नुहोस्